weebsayitoota maalaqa malee live isportii agarsiisan/
Weebsaayitoota maallaqa malee Isportii online dabarsan keessaa muraasa
October 7, 2017 October 28, 2017 Gaachana Sabaa
Ani akka dhuunfaa kiyyaatti Isportiif jaalala addaan qaba.Keessaahuu kubbaa miilaatiif, osoo taphni jiruu hojii hojjachuun akka malee natti ulfaata garuu yeroo baay’ee sanbattan lamaan waan taphatamuuf daawwachuuf wanti nabarbaachisu TV’n kiyya sirnaan hojjachuu isaati garuu yoo hin hojjannehoo maal godhuun qaba?
Oollaa deemuuf oollaan hundi kubbaa hin jaallatu ykn Diishiin walii galatti yoo badehoo, malli hafe baay’ee xiqqaadha.Yoo Interneetii fi Kompitara ykn bilbila kee of harkaa qabaatte kun Furmaata keeti.Yoo Online barbaadde akka salphaatti argachuu dadhabdeef jecha asiin gaditti muraasa isaanii kaaheen jiraa,guyyaa hamaaf siif tahaa yaaluu hin dagatin.
Weebsaayitiin kun weebsaayitoota maallaqa malee live sportii dabarsan keessaa isa tokko dha.Sportiilee as irratti dabarfaman keessaa Kubbaa Miilaa,NFL fi F1 yeroo tahu fuula kana irratti Live daawwachuuf isa salphaadha.Live daawwachuu qofa osoo hin taane irra deebii ( highlight) illee daawwachuun ni danda’ama.wanti baay’ee namatti tolu fuula kana irraa carraa weebsaayitii kee irratti embed godhuu (koodii fudhachuu dhaan) nii kennu.
Fuulli isaanii qulqulluu fii interneetii dhadhabaanis inuma daawwatama.Wanti dabalataa maxxansaalee garaagaraa waa’ee ispoortii fi oduu isportii dubbisuuf nii argatta. akka weebsaayitoota biroo galmee fii beeksisa(ad-pop) waan hin qabneef anaaf filannoo kiyya isa tokkoffaadha.Wanti gaariin biraa karaa tokkoo oliin tapha tokko daawwachuu dandeessa yoo sidides refresh godhuudhaan itti fufta.
Stream2watch ru’n weebsaayitii guguddoo live sportii agarsiisan keessaa isa biraati.Fuula jalqabaa irratti sagantaalee isportii jiran keessaa kan barbaadde filattee “Watch Now! HD” tuquudhaan daawwachuu dandeessa.Weebsaayitii kana irratti wanti hin tolle beeksisa pop up isaaniiti.Wanti namatti tolu karaa tokkoo oliin tapha tokko daawwachuu dandeessa akkasumas wanti tapha ispoortii jedhame hunda asirratti argama.
Bosscast weebsitoota isportii live dabrsan keessaa isa tokko dha.Isportiilee as irratti daawwataman keessaa Kubbaa Miilaa,F1,Rugby,Basketball fi kkf yoo tahu TV adda addaas ni agarsiisu.Fuula kana duraa isaa irratti SCHEDULE tuquudhaan sagantaa guyyaa fii yeroo isaa ilaaluu dandeessa.
Batmanstream akkuma weebsayitoota isportii live dhiheessanii biro gosa isportii hedduu kan dhiheessan yoo tahu wanti namatti tolu fuula kana irraa tapha live darbaa jiru barbaaduun ofii keetii stream godhuu dandeessa.Weebsaayitii kee irrattis koodii fudhachuudhaan maxxansuu dandeessa.Sa’atii tapha akka naannoo keetiitti baruudhaaf zoonii yeroo jijjiiruu dandeessa.
All sports live Weebsaayitii Russiatti argamu tahee Isportiilee gosa adda addaa kan dhiheessaan yoo tahu akka dubbisuu dandeessuuf google translate fayyadamuun dirqama taha.Fuula duraa irratti sagantaan guyyaa waan bahuuf kan feete filattee daawwachuu dandeessa.guutumatti mallaqa malee waan taheef ilaaluu hin dagatin.
← Biyya Ameerikaa magaalaa Las Vegasitti namni 58 ajjeefamani 527 kan tahan immoo madaa’an
Breaking News:Abbaa Duulaa Gammadaa hojii isaanii lakkisan →
Pogba ‘n miidhaarra akkuma deebiheen galchii galmessise
November 19, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Pogba ‘n miidhaarra akkuma deebiheen galchii galmessise
Ibrahimovic fii Pogban tapha Newcastle waliin tahu irratti nii hirmaatu
November 18, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Ibrahimovic fii Pogban tapha Newcastle waliin tahu irratti nii hirmaatu
Karaa gabaabaan kiiboordiitti akka itti fayyadamtu
September 8, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Karaa gabaabaan kiiboordiitti akka itti fayyadamtu
Geerarsa Haacaaluu Hundeessaa
The cruelty of Ethiopian Army
FACEBOOK IRRATTI NU HORDOFAA
Copyright ©2017:GS/All rights reserved.